" ပြိုင်လုပ်လို့ မရရင် ပေါင်းလုပ်ဖို့ ကြိုစဉ်းစားထား . ပြိုင်လို့လည်းမရ . ပေါင်းလို့လည်း မရရင်တော့ ပြေးဖို့ နည်းလမ်းရှာထား . အသေခံတော့ မတိုက်နဲ့ " - Eureka Myanmar |
Home Article Biography Boss Myanmar News Opinion " ပြိုင်လုပ်လို့ မရရင် ပေါင်းလုပ်ဖို့ ကြိုစဉ်းစားထား . ပြိုင်လို့လည်းမရ . ပေါင်းလို့လည်း မရရင်တော့ ပြေးဖို့ နည်းလမ်းရှာထား . အသေခံတော့ မတိုက်နဲ့ "
Article Biography Boss Myanmar News Opinion
" ပြိုင်လုပ်လို့ မရရင် ပေါင်းလုပ်ဖို့ ကြိုစဉ်းစားထား . ပြိုင်လို့လည်းမရ . ပေါင်းလို့လည်း မရရင်တော့ ပြေးဖို့ နည်းလမ်းရှာထား . အသေခံတော့ မတိုက်နဲ့ "
၇ တန်းအောင် လူငယ်လေးဘဝကနေ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ အာရှဓနဘဏ် တည်ထောင်သူ ဦးအိုက်ထွန်း
လူငယ်လေးတစ်ယောက် ၇ တန်းပြီးတော့ ရွေးချယ်စရာ နည်းပါးတဲ့ခေတ်မှာ ရှမ်းပြည်ဖက်မှာ ကားဝပ်ရှော့ လုပ်ဖြစ်တယ် . နောက် ဓားပြတွေ ရန်ကြောက်လို့ ရန်ကုန်ကို အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ တက်လာတယ် .ရန်ကုန်ရောက်တော့ ၃ ဘီး မောင်းတယ် . ၃ ဘီး မောင်းနေရင်း လက်ဖက်ခြောက် ကုန်သည်နဲ့တွေ့လို့ အဲဒီအိမ်မှာ ဒရိုင်ဘာ လုပ်ရာကနေ အရောင်းအဝယ်ပညာ သင်ယူခဲ့တယ် .
အိမ်ထောင်ကျ ကလေးရပြီး အဆင်မပြေတော့ လမ်းဘေးမှာ ဈေးရောင်းတယ် . ၄ နှစ်လောက် ရောင်းပြီး စုဆောင်းရငွေ နဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တွေ မုန့်တွေ လက်ကားရောင်းတယ် . နောက် border trade ပြောင်းလုပ်တယ် . အဲလိုနဲ့ ၁၉၉၀ မှာ ကုမ္ပဏီ စထောင်တယ် . ဘဏ်တွေ ထောင်တယ် . ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်တယ် . နောက် ဘဏ်ကို ပိတ်ရတော့ shopping center တွေဖက်လှည့်တယ် . ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ် နဲ့ အမြန်လမ်းတွေ ဖောက်တယ် . အဲလိုနဲ့ ခု ရွှေတောင်ဖြစ်လာသတဲ့ ..ပွဲက personal branding ဆန်ပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ ၇ တန်းပဲ အောင်ပြီး အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးပညာတွေ MBA တွေ သင်ခွင့် မရပေမယ့် သူ့ဘဝအကြောင်းပြောနေရင်း သူ့ အတွေ့အကြုံကလာတဲ့ ရိုးရှင်းပြီး နားလည်ရလွယ်တဲ့ စီးပွားရေး ပညာ တချို့ ကြားခွင့်ရခဲ့တယ် .
နောက်ဆုံး စကား လက်ဆောင်ကတော့ အမြဲ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ထားပြီး ကောင်းတာတွေ့ရင်ယူ . အများယုံကြည်မှုရအောင် ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိရှိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက် ပြင်ဆင်ထားပါ . ဒီလို ပြင်ဆင်ကြိုးစားရင်း ဆုံးရှုံးမှုတွေ . ရှုံးနိမ့်မှုတွေ ကြုံလာတိုင်း ဒါတွေက ခဏတာ ယာယီပါလို့ နှလုံးသွင်းရင်း ဘဝကိုပျော်ပျော် ရွင်ရွင် ဖြတ်သန်းပါ . နောက်ဆုံးမှာတော့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ့်ဆီရောက်လာမှာ အသေအချာပါ။
Tags: Article Biography Boss Myanmar News Opinion